လူမှန်နေရာမှန် ပြန်ရောက်လာကြသူများ ၊ လူသစ်တွေ ကောင်းနေဆဲ ဘာစီလိုနာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
လူမှန်နေရာမှန် ပြန်ရောက်လာကြသူများ ၊ လူသစ်တွေ ကောင်းနေဆဲ ဘာစီလိုနာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစားသွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ အာဆင်နယ် ဟာ ဝက်ဖိုဒ့် ကို အဝေးကွင်းမှာ ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၄ နေရာကို တက်ရောက် လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
နောက်ထပ် ပွဲစဉ် မှာတော့ အဆင့် ၁ နေရာက မန်ချက်စတာ စီးတီး ဟာ မြို့ခံ အသင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံ ခဲ့ပြီး ၄-၁ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားကာ လီဗာပူး ကို ၆ မှတ် ဆက်လက် ဖြတ်ထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရိုနယ်ဒို ဟာ ဒီပွဲကို မပါဝင်ခဲ့ဘဲ နည်းပြ ရန်းနစ် ကတော့ ရိုနယ်ဒို ဟာ တင်ပါးဆုံမှာ ဒဏ်ရာ ရှိနေတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ အေစီမီလန် ဟာ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆု အတွက် အရေးပါတဲ့ ပွဲမှာ နာပိုလီ အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် မီလန် တို့ အဆင့် ၁ ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းကတော့ အဝေးကွင်းမှာ အယ်လ်ချီ အသင်းကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး မမ်းဖစ်ဒီပိုင်း နဲ့ ဇန်နဝါရီ ကမှ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ဖာနန်တောရက်စ် တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး အာဆင်ဝင်းဂါး က ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ပင်နယ်တီ မဝင်ခဲ့မှုဟာ ဘူကာယို ဆာကာ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အလှည့်အပြောင်းတခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုရာသီမှာ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနေခြင်း ရဲ့ တွန်းအား တခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း အသင်းဟာ လိုင်လီ အသင်းရဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် ကစားသမားလေး အာမာဒူ အိုနာနာ ကို လာမယ့် ရာသီမှာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေပြီး ပေါင် သန်း ၂၀ ဝန်းကျင် ကုန်ကျ ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် အသင်းတွေဟာ စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ယူကရိန်း က လူငယ်လေးတွေကို သူတို့ရဲ့ အကယ်ဒမီတွေမှာ ခေါ်ယူ လေ့ကျင့်ပေးဖို့ သဘောတူညီ ထားတယ်လို့ ယူကရိန်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ရှက်ဗ်ချန်ကို က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဆားဘီးယား တင်းနစ် အကျော်အမော် ဂျိုကိုဗစ် ကလည်း ယူကရိန်း မှာ တိုက်ပွဲဝင် နေတဲ့ တင်းနစ် ကစားသမားဟောင်း ဆာဂျီ စတက်ဗ်ဟော့စကီး ကို လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ် သွားမယ်လို့ အသိပေးပြီး အားပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ လာမယ့် ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် မရရှိပါက နွေရာသီ အသုံးစာရိတ် အဖြစ် ပေါင် သန်း ၅၀ သာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ငွေပို ငွေလျှံ ရရှိအောင် ကစားသမားတွေ ရောင်းထုတ် ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ရဲ့ အမေရိကန် ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဝက်စတန် မက်ကိန်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲတုန်းက ဒဏ်ရာ ကြောင့် လက်ကျန် ပွဲအားလုံးကို လွဲချော် တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ နည်းပြ အယ်လီဂရီ က အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရိုးမား ကတော့ နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှု ရရှိ ထားတဲ့ ဘင်ဖီကာ ဂိုးသမား မီလီ ဆဗီလာ ရဲ့ အပြောင်း အရွှေ့ ကို လာမယ့် ရက်ပိုင်း အတွင်း အပြီးသတ် နိုင်ဖု့ိ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အနားယူသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ရှုံးပွဲ မရှိ UFC ချန်ပီယံဟောင်း ခါဘစ် နူမာဂိုမီဒေါ့ ကို UFC Hall of Fame ထဲမှာ ထည့်သွင်းတော့မယ် လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article အလန်းစား သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဂန်းနားတို့ လေးပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပွဲမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာများ
Next Article မန်စီးတီး ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဒုတိယပိုင်း ကစားပုံကို ချီးကျုးပြောဆို ခဲ့တဲ့ နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ